यो कसको सरकार हो!
सम्पादकीय सम्पादकीय 'सरकार हाम्रा लागि होइन रहेछ।' 'यो सरकारलाई हाम्रो आँसुको श्राप लाग्नेछ।' भूकम्पपीडितका मनभित्रबाट प्रस्फुटित आवाज हुन् यी। तर, सरकारले यी आवाज सुन्ने प्रयत्न गरेको देखिँदैन। त्यसकारण पनि सर्वत्र प्रश्न उठ्न थालेको छ– यो कसको सरकार हो? गत वैशाखको भूकम्पीय विपत्तिमा… विस्तृतमा पढ्नुस्
भूकम्पले नभत्काएको आदत [विचार]
गुणराज लुइँटेल गुणराज लुइँटेल आज एक वर्ष पुग्यो– भूकम्प २०७२ को। त्यसमा पनि भूकम्प गएलगत्तैको भावुक स्थिति हाम्रो मानसपटलबाट कहिल्यै विस्मृतिमा जाने छैन। त्यो अवधिमा हामीले वास्तविक विपत्तिको अनुहार देख्यौँ। विस्तृतमा पढ्नुस्
विपुल पोख्रेल विपुल पोख्रेल कांग्रेस महाधिवेशनलगत्तै सरकार परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको थियो। सत्ता साझेदार दलको नेतामात्र हैन, सरकार सञ्चालन संयन्त्रको संयोजकसमेत रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयंले सरकार परिवर्तन हुने कुरा सार्वजनिक गरिदिएका थिए। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका नेताहरूले पनि कांग्रेस सरकारमा आउने वा… विस्तृतमा पढ्नुस्
भूकम्पीय जोखिमको अवस्था
सुधीर रजौरे सुधीर रजौरे भूकम्प एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो जसको माध्यमबाट पृथ्वीको माथिल्लो भागमा वषर्ौंदेखि सञ्चित ऊर्जा क्षय हुने गर्छ। म्याग्नेच्युड ४ भन्दा साना भूकम्प नेपालमा दिनहुँ गइरहेका हुन्छन् तर तिनीहरुले खासै क्षति पुर्या उन सक्दैनन्। ठूलो म्याग्नेच्युडको भूकम्प लामो समयको अन्तरालमा जान्छन् तर… विस्तृतमा पढ्नुस्
पाँच 'ब' को भूकम्प
अर्जुन न्यौपाने 'गोगनेे' अर्जुन न्यौपाने 'गोगनेे' वैशाख १२ मा भूकम्प गएको एक वर्ष भयो। गोरखा जिल्लालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर १०–१५ कि.मि. जमिनमुनिबाट उत्पन्न शक्तिशाली भूकम्पले १५–२०जिल्ल्ाालाई नराम्ररी प्रभाव पार्योग भने ९ हजारको हाराहारीमा ज्यान लियो। ५ लाखभन्दा अधिक घर पूणर््ारूपमा ध्वस्त भए भने ४ लाखभन्दा बढी आंशिक… विस्तृतमा पढ्नुस्
मनसुन र निर्माणाधीन सडक
डा. रन्जनकुमार दाहाल डा. रन्जनकुमार दाहाल वैशाख ६ गते परेको छोटो समयको पानीले मुग्लिङ–नारायणगढ सडक अवरुद्ध भएको खबर आयो। यो सडक अहिले एसियालीस्तरमा स्तरोन्नति हुँदै चार लेनको बन्ने अवस्थामा रहेको छ। मुग्लिङ–नारायणगढ सडकको गत १५ वर्षदेखिको लगातार भौगर्भिक अध्ययनले देखाएका केही महत्वपूर्ण तर बिर्सिएका पाटो अब… विस्तृतमा पढ्नुस्
22 Apr 2016 शुक्रबार १० बैशाख, २०७३
सम्पादकीय सम्पादकीय हामीमध्ये धेरैलाई लाग्छ– कुकुरलाई घरेलु बनायौं। यथार्थमा कुकुरले हामीलाई घरेलु बनाएको हो। जंगली ब्वाँसोका बच्चाहरूको निर्दोषीपनलाई मानिसले अनुभव गरेपछि आफूसँग राखे र कालान्तरमा तिनीहरू नै सिकारीका निम्ति अत्यन्त उपयोगी साबित भए। विस्तृतमा पढ्नुस्
सीके लाल सीके लाल आश, अवसाद, विश्वास एवं हतासाको विरोधाभासयुक्त वर्तमानमा पत्याउन गाह्रो लाग्न सक्छ, तर फगत एक दशकअघि नेपालमा ऐतिहासिक 'वसन्त विद्रोह' भएको थियो। जनआन्दोलनको उत्कर्ष अप्रिल २२, २००६ का दिन भयो जब कर्फ्यु तोड्दै घरघरबाट सामान्यजन सडकमा ओर्लिए। शाही सत्ता त्यसपछि लाचार… विस्तृतमा पढ्नुस्
अभय श्रेष्ठ अभय श्रेष्ठ नांगो पहाडको ढाडजस्तो उडिलो कपालविहीन शिर मुसार्दै सात वर्षअघि उनी काठमाडौँको एउटा सिनेमा उत्सवमा उत्रिए। 'तपाईँका सिनेमामा के हुन्छ?' पर्यटन बोर्डको कौचमा एक्लै भेटिएका प्रख्यात भारतीय निर्देशक गोविन्द निहलानी मेरो कचिल्टो प्रश्नमाथि अपेक्षाविपरीत अत्यन्त गम्भीर भएका थिए। उनले भने, 'मेरा… विस्तृतमा पढ्नुस्
StartPrev…NextEndPage 15 of 506	भर्खरै...